Alshabaab oo laba garab u kala jabtay, dil iyo khaarajin dhexdooda ka dillaacay oo aw u danbeeyey Ibrahim (afghani) Ibrahim Xaaji Jaamac Miicaad anu khaarajiyey Axmad Godane « BakiPress.com
« Halkan ka akhriso golaha wasiirada Siilaanyo magacaabay oo la labalaabay iyo reeraha ay ka soo kala jeedaan
1. Ibraahim Xaaji Jaamac Meecaad oo ku magac dheer (Ibraahim Afghan), balse Gudaha Kooxda Al-shabaab loogu yaqaan Abubakar Al-Zeylici ahaana ninka ku xiga ina Godane, ayaa la sheegayaa in la khaarajiyey kadib markii dhawaan Maleeshiyo Daacad u ah Axmed Aw-cabdi Godane ay weerar ku qaadeen goob u ka deganaa Ibrahim Magaalada Baraawe. colka axmad godane waxa lagu sheegay ilaa 800 oo askari waxana watay nin la yidhaa Cali Rooti, waxana dhexmaray labada dhinac dagaal adag oo dhimasho iyo dhaawcba lahaa halkaasoo Ibrahim lagu qabtay kadibna qoorta laga jaray 19kii june 2013. sidoo kale waxa la qabtay Burhan, Odowaa,Xigmatiyaar,Zubeyr Al-Muhaajir iyo Abu Yoonis oo dhamaantood loo badinayo in iyagana la laayey, waxana cararay oo aan la qaban horjooge Xasan Afrax.
Ibraahim Xaaji Jaamac Meecaad(Ibraahim Afghan) wuxu ku dhashay magaalada Hargeysa halkaas oo uu kubaratay quranka, kadibna wuxu ka qaybgalay dagaalkii Afghanistaan. Ibraahim wuxu ka soo jeeda beesha Sacad Muuse ee dega waqooyiga Somalia. Ibahim xaaji iyo Axmad Godane oo Arab ah ayaa labada reer ee ay ka soo kala jeedaan ay cadaawadi dhextaal kadib dagaalo hore oo soo kala dhexmaray. labadaan Mas’uul ayaa iyaguna in muddo ahba waxaa ka dhaxeeyay loolan dhinaca Mas’uuliyada iyo Hogaanka Al-shabaab ah iyo fikirka siyaasiga ah oo ay ku sii kala fogaadeen.
2. Abu Manuur Alamriki oo ahaa nin asalkiisu suuriya ka soo jeedo, dhalasho ahaanaa maraykanah ayaa isagana lagu dilay rama caddey 7dii june 2013 , waxa isagana khaarajiyey Axmad Cabdi Godane. Alamriki wuxu ahaa nin aad u firfircoon oo ururka u soo jiiday dagaalyahano badan oo dalaka reer galbeedka ka tagay siiba maraykanka kanada iyo Yurub. Sidoo kale wuxu ahaa ragga maraykanku sida weyn ugu dabajoogeen ee madaxooga u dul dhigay 5 milyan oo dollar. Cumar Alxamaami wuxu ka tirsanaa garabka Ibraahim.
3. Xasan Daahir Aweys wuxu dhashay 1935 wuxuna ku dhashay magaalada cadaado. Xasan daahir wuxu kamid ahaa saraakiisha ciidamada Asluubta intaan dalku burburin. 1994-2002 intii u dhaxaysay Xasan wuxu madax u ahaa xisbigii la odhan jiray Alitxaad, wuxuna dagaalo la galay: Dawladda iyoobiya, SNF iyo maamulka bari ee hadda la baxay Puntland. waca jirtay Cabdillahi Yusuf madax ka ahaa maamulkaa inay mar gacanta ku dhigeen, kadib markii waanwaan lagalayna ay sii daayeen, waxana xisbigaas jabiyey markii danbe Cabdilaahi yusuf.
2004-2006 Xasan dahir haddana wuxu sameeyey ururkii Maxkamadaha waxanay gacanta ku dhigeen Muqdisho oo markaa ay ka talinayeen dagaalogeyaashii. ugu danbeyntii 2009-20210 hadana xasan wuxu sameeyey ururka la yidhaaXisbul islaam oo markii danbe ay isku biireen Alshabaab. Xasan Daahir oo illaa hadda ka tirsan Alshabaab ayaa shalayto isku dhiibay maamulka Ximin iyo Xeeb kadib markii dagaalku dhex qarxay ciidamadii Ibrahim iyo kuwii Axmad godane balse an isaga weli loo iman ayuu meesha isaga baxsaday. Xasan isagana waxay isku garab yihiin Ibrahim Afghani.
4. Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) ayaa isaguna naftiisa kala cararay magaalada Baraawe, waxana la sheegaya inu afka saaray gobolka Bay oo u ka soo jeedo. Mukhtar isaguna wuxu baraawe ka cararay isaga iyo Xasan Daahirba markii Ibrahim iyo raga kale la qabtay balse an iyaga weli anla soo gaadhin, wuxuna ka mid yahay garabka Ibrahim afghan. Mukhtaar Roobow wuxu ku dhashay magaalada Berdaale 1960 kii, halkaasuu quraanka ku bartay, inta kadibna jaamacatal kharduum ayuu wax ku bartay, wuxuna ka mid ahaa ragii ka soo dagaalmay Afghanistan waxa kalo oo u kamid ahaa aasaaseyaashii alshabaab wuxuna ka soo jeeda qabiil la yidhaa Leysan oo ka tirsan beesha Raxanweyn.
5. Fuad Maxamad Khalaf (shangole): wuxu dhashay magaalada Moqdisho sanadku markuu ahaa 28kii march 1965 kii. Fuad wuxu quraanka ku bartay islam muqdhiso. Fuad markii u yaraa wuxu ahaa qalqaalli dagaal badan. 1992 markii xamar lagu kala yaacay ayaa wux uu qaxooti isaga dhiibay dalka Sweden halkaas oo dhalaso u ka qaatay. sida la sheegayo fuad wuxu imam ka noday masaajid ku yaal caasimada kadibna wuxu u soo guuray xamar oo u ku biiray ururkii Maxaakiimta wuxuna ka noqday wasiirka waxbarashada u qaabilsan. Fuad wuxu kamid yahay raga maraykanku raadinayo. intii alshabaab ku tirsanaana dhibaatooyin badan ayuu geystey sida: gabadh yar oo dhagax lagu dilay iyo dhallinyaro dhawr ah oo qaarna gacmaha la jaray qaarna carrabka oo isaga loo wada aanaynayo. Fuad wuxu kamid yahay garabka Ibrahim, waxana la sheegayaa inu ka baxsaday Alshabaab isagoo markii ugu danbaysay lagu sheegay bolloburde.
6.Axmad Cabdi Godane:
wuxu ku dhashay magaalada Hargeysa sannadku markuu ahaa 10kii July 1977 kii, halkaas oo u qaraanka ku bartay. waxa kale oo u iskoolarship siiyey xaas sucuudiyiin ah wuxuna culuumta diinta ku soo bartay baakistaan. wuxu ka qabgalay dagaalkii Afghanistaan. kadib markii dagaalku dhamaaday wuxu ku soo laabtay Hargeysa wuxuna shaqo ka helay xawaaladdii Barakaat ee lala xidhiidhiyey Alqaacida. wixii intaa ka danbeeyey wuxu ku mid noqday maxaakiimta, alshabaab iyo Alqaacida. inta ogyahay waxa garabkiisa raacsan lama yaqaan oon isaga ka ahayn.
Gebagabo, kala qaysanaanta iyo dildillaaca ka soo ifbaxaya Alshaab iyo dilka iyo dhagarta soo kala dhexgashay waxay ididiilo galinaysaa nin walloo Somalia oo doonaya inu maruun dalku inoo xasilo. waxana jira rag kale oo farabadan oo labadan garab kala raacsan iyo qaar kale oo dhan la raaciyo ilaa hadda an la garaneyn, balse arrinkoodu wuxu kala cadaan doono dhawaan iyo halka ay saldhigto colaada madaxda Alshabaab.
This entry was posted on June 27, 2013 at 4:05 am	and is filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
One Response to “Alshabaab oo laba garab u kala jabtay, dil iyo khaarajin dhexdooda ka dillaacay oo aw u danbeeyey Ibrahim (afghani) Ibrahim Xaaji Jaamac Miicaad anu khaarajiyey Axmad Godane”
clients, how to calculate prices, what equipment and supplies are needed etc, and in my